Traktat Nigerianisch Igbo - tract Igbo
Traktat Nigerianisch Igbo
Ḿbọ̀ niile mmadụ na-agba iji were chọpụta ihe ndụ pụtara bụ n‘efu. Mgbalị niile isi n‘ụzọ okpukperechi na eziomume chọta Chineke enweghị isi. Ịchọ Chineke n‘elu ụwa site n‘echiche anyị enweghịkwa ebe ọ na-eduru anyị. Ndị mmadụ na-eche na Chineke ka nọ ebe tere aka, ya mere olileanya udo nke ime mmụọ jiri gbalahị ha. Anyị niile nwere mmụọ ịchọ Chineke n‘ụdị pụrụ iche ma anyị ebu ya n‘obi ma anyị ebughị ya. Site n‘óké ọchịchọ ị ga alaeze nke anyị nwere, anyị na-agbalị imechi ohere nke dị n‘etiti anyị na Chineke.
Ọrụ aka Chineke onye kere ụwa, gosịpụtara n‘ahụ anyị niile maka na o nwere nzube na okike o kere anyị. Ịchọpụta ihe gbasara anyị ma ọ bụ ndụ anyị abughị ihe kachasị mkpa, ọ bụ n‘ime Chineke ka anyị ga-esi ghọta ndụ anyị dị.
Ị gaghị ajụ ihe gbasara ndụ gị ma ọ bụrụ na i bughị ụzọ jụọ maka Chineke.
Nke a bụ ajụjụ na-eche anyị niile, nke onye ọ bụla ga-aza ugbu a ma ọ bụ n‘ọdịnihu.
ebighị ebi n‘obi mmadụ.
(Eklisiastis 3:11) Leseprobe/Extract
Akwụkwọ mbipụta mbụ n‘asụsụ Igbo: 2013